အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အဖြူရောင် သဘာဝရေပူကန်များ
အရှိန်ဖြင့် စီးကျနေတဲ့ လှပသော ရေတံခွန်ရှိနေတာကလည်း ရေအိုင်ရဲ့အလှကို ပိုပြီး ထူးခြား လှပနေစေပါတယ်။ Austin ကနေ ၂၃မိုင် ကွာဝေးတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Hamilton ရေအိုင်ကြီးဟာ Austin မှာ နေထိုင်ကြသူတွေနဲ့ အလည်ရောက်နေကြသူတွေ နွေရာသီမှာ ရေကူးအပန်းဖြေဖို့ သိပ်ကို နှစ်သက်သဘောကျကြတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ရေကန်ရဲ့ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ ကျောက်လွှာတွေဟာ အထပ်ထပ်နဲ့ ဝန်းရံနေပြီး ၄င်းတို့ကြားထဲမှာ ရေညှိလွှာတွေ၊ ဒရင်ကောက်ပင်တွေနဲ့ ကျောက်တောင်တွေမှာ ရှင်သန်နေထိုင်တတ်တဲ့ ပျံလွှားငှက်တွေ နေထိုင်ကျက်စား ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနေပါတယ်။ ရေကန်ရဲ့ အမိုးမျက်နှာကျက်ကနေ ထုံးကျောက် ကျောက်ခက်ပန်းဆွဲတွေလည်း အချောင်းလိုက် စီရီတွဲလွဲ ဆွဲကျလို့နေပါတယ်။
သို့သော်လည်း သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြေအောက်ရေကန်ရဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပေါက်ရောက်နေတဲ့ ခြုံပင် နွယ်ပင်တွေကြောင့် ရေကန်ရဲ့ သန့်စင်မှုကို မကြာခဏ စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်သလို ရေကူးနိုင်ခွင့်ကိုလည်း အခါအားလျော်စွာ တားမြစ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ သင်သာ အဲဒီနေရာကို ရေကူးဖို့ ရောက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ရေမကူးခင်မှာ တာဝန်ရှိသူတွေကို ရေကန်ထဲက ရေရဲ့ သန့်စင်မှုကို စစ်ဆေးပေးဖို့ အရင်တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။ ရေကန်ဟာသဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ဧရိယာအတွင်းမှာ ပါဝင်တာကြောင့် ၄င်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငါးမျှားခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ စခန်းချနေထိုင်ခြင်း၊ မီးမွှေးခြင်း၊ အစားအစာ ချက်ပြုတ်စားသောက်ခြင်း၊ ခွေးစသော တိရိစ္ဆာန်များ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း စသည်တို့ကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ ရေကန်ကို သွားရောက်လိုသူများအတွက် ကားပါကင် စီစဉ်ထားရှိသော်လည်း တစ်ကြိမ်လျှင် ကားစီးရေ ၇၅စီးသာ ထားနိုင်တဲ့အတွက် လူအသွားအလာ များတဲ့နေ့မျိုးမှာ ကားနေရာရဖို့ကို စောင့်ဆိုင်းရလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗဟုသုတအဖြစ် ပြန်လည် မျှဝေပါသည်။
Sources and photos from pamukkaleturkey.com and google
20 Responses to “အဖြူရောင် သဘာဝရေပူကန်များ”
စိတ်ဝင်စားစရာတွေပဲ ရွေးတင်ပေးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေလည်း ကောင်းတယ်နော်။
အဲဒါတွေ ကို မှီပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေလဲ ရပ်တည်ကြရတာပဲ။
ရေပူသွားစိမ်ချင်တယ်မချော.။ အခါအခွင့်သင့်ရင်တော့ တခါတခေါက်တော့
အဲဒီသဘာဝ ရေပူကန်ထဲ စိမ်ချင်လိုက်တာ။ စာတွေကြည့်ရလွန်းလို့ တကိုယ်လုံး ညောင်းညာနေတာလေးများ သက်သာမလားလို့။ မြန်မာပြည်ကရေပူစမ်းတောင် တခါမှမရောက်ဖူးတာမို့ တခြားနေရာ ဝေးရောပဲ။ ချောပို့စ်တင်မှ ဒါမျိုးလေးတွေ သိရတယ်။
မချော... လုပ်လိုက်တော့..။ ပျော်ပွဲစားခရီးလေး..။ အရင်ကတင်ထားတဲ့ ဟင်းတွေချက်ပြီး သယ်လာဖို့တော့ မမေ့နဲ့နော်... အဟဲ...
I wish I could visit those places you mentioned in many posts Chaw. Thank you for sharing too!!!
ချောရေ မင်္ဂလာပါ ရေပူစမ်းဆိုလို့ သထုံဘက်မှာပဲ တစ်ခါသွားလည်ဖူးတယ်။ ရေပူကန်တော့ သွားမလည်ဖူးသေးဘူး။ ချောတင်ပေးမှပဲ တူရကီ သွားလည်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်လာပြီ။ ထူးထူးဆန်းဆန်း ကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြည်လင်ဝင်းပ အေးမြပါစေ...
တူရကီက ရေပူစမ်းအကြောင်းတော့ တခါဖတ်ဖူးတယ်၊ တက္ကဆက်က ရေကန်က လှလိုက်တာ..၊ နွေရာသီမှာ ဆင်းစိမ်ရရင် ဇိမ်ပဲ..။း)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သဘာဝရေကန်လှလှတွေ အများကြီးပဲနော်...
ဒါပေမယ့် သွားလည်ဖို့ ပိုက်ချံချိဝူးးးးးးးးး :(
ကဲ ဘလော့ဂ်ဂါ ညီမ များနဲ့ အတူ သွားမယ် ချော ရေ မကျန်ရစ်နဲ့နော်
ခုတော့ ....ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးပဲယဉ်နိုင်တော့တယ်အစ်မရေ...
OK....I'll come along with whoever go wherever chaw posted.Don't leave me.Whatalovely atmosphere we have!Thanks for sharing.You build wonderful blog.
ဖော်ဝပ်မေးလ်ထဲကနေ တွေ့ဖူးတယ် ချောရဲ့၊ တအား လှလွန်းလို့ သွားချင် နေခဲ့တာ။ ဈေးကြီးတယ်ဆိုလို့ ငြိမ်နေတာ၊ ခု ရောဂါက ပြန်ထလာပြီ...ဟဟဟ :P
ဗဟုသုတရစရာပိုစ့်လေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မချော။
ချောရေ ထူးဆန်းထွေလာလေးတွေ ဖတ်ရှုပြီး ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ကွယ် အန်တီတော့ လားရှိုး ကျိုင်းတုံ ရေပူစမ်းလေးတွေရောက်တာတောင် စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေတာ မချော တင်ထားတဲ့ ထူးဆန်းဖွယ် ရေပူကန်လေးတွေကိုတော့ စိတ်မှန်းနဲ့တင် ကျေနပ်နေပါပြီ။
Hamilton က ရေကန်လေးကို သွားချင်လိုက်တာ ချောရယ်။
သဘာဝရဲ့ ဆန်းကျယ်မှုကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ လှလိုက်တာ.. ထိုင်ကြည့်နေရတင် စိတ်ကြည်နူးမိတယ်။